Bixinta Viisaha XAJKA oo Wadanka gudihiisa Laga bilaabay. — FAAFIYE.COM
Bixinta Viisaha XAJKA oo Wadanka gudihiisa Laga bilaabay.
Dawlada Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daah furtay bixinta Fiisooyinka loogu tala galay in ay sanadkan qaataan dadka Soomaaliyeed ee soo gudanaya waajibaadka Xajka.
Wasaarada Diinta iyo Awqaafata Xukuumada Soomaaliya ayaa sanadkan wax badan ka bedeshay qaabkii loo bixin jiray Fiisooyinka Xajka iyo sidoo kale adeegyadii dadka Xujeyda heli jireen oo sanadkan sare loo qaadayo.
Munaasabadda Daahfurka Habkan cusub oo lagu helidoona Visaha Xajka waxaa goob joog ahaa raiisul wasare kuxigeenka Dalka,madaxda wasaradda,xildhibaano,ganacsato iyo culimaa,udiin kale,waxaana halkaasi lagu faah faahiyay muhiimadda arrintani ay leedahay.
Guddoomiyaha guddiga Cadaaladda , Owqaafta iyo arrimaha Diinta ee Aqalka Sare Shariif Sheekuna maye ayaa goobtaasi ka sheegay in ay tahay horumar dalka uu ku talaabsaday, marba haddii Visaha Xajka dalka gudihiisa laga qaadanayo ,iyadoo loo doonan jiray wadamo kale sida jabuuti.
Wasiirka Owqaafta iyo arrimaha Diinta Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa ra’iiusl wasare ku-xigeenka dalka u sharaxay dadaalkii loo soo maray hirgelinta in dalka gudihiisa laga qaato viisaha Xajka isagoo xusay in juhdi badan lagu bixiyay ugu dambeyna laga miro dhaliyay.
Raisul Wasaare ku-xigeenka Somalia Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo si rasmi ah u daahfuray habka cusub ee dalka looga qaadan karo Visaha Xajka, wuxuuna xusay in ay qeyb ka tahay barnaamijyada horumarineed ee adeegyada bulshada oo ay waddo Xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna ku booriyey masuuliyiinta wasaarada iney si hufan ugu shaqeeyaan xujeyda sanadkan soo gudaneysa waajibaadka Xajka.
Xajka SomaliaXajka Soomaliya
Abaal marin la gudoonsiiyay Imaam bad baadiyay 262 qofood.